ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုကျွန်ုပ်ဘာပြောသလဲ။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောပြproblemsနာများအကြောင်းကျွန်ုပ်မည်သို့စတင်စကားပြောသနည်း။ ၎င်းသည်ဘဝတွင်အခက်ခဲဆုံးအဆင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဤတွင်အချို့သောအကြီးအစိတ်ကူးများရှိပါတယ်။
ဒီ5မိနစ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပါ: ငါ porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေ recover အဖြစ်ဘယ်လောက်ကြာကြာငါယနေ့အထိစောင့်ဆိုင်းသင့်သလဲ နောဧသည်ဘုရားကျောင်းသည်။
သို့မဟုတ် Mark Queppet ၏မိနစ် ၂၀ ဗီဒီယို - ထိပ်တန်း3အမှားတွေကိုတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ကို restart ကျသောအခါ
သူမ၏မဟုတ်ရင် upstanding ယောက်ျားသည်လည်းမိမိမတွေ့ရသေးတဲ့အတွက်အန္တရာယ်များကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးစတင်ခဲ့ကွောငျးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့သူမိတ်ဆွေတစ်ဦးကပြောသည်:
အမြိုးသမီးမြားအမျက်ဒေါသ, ရွံရှာခြင်းနှင့်ငြင်းပယ်ခံရသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကြှနျတေျာ့အမှု၌၎င်း, ငါဒီအတွေ့အကြုံကိုအတွက်တစ်ဦးတည်းမဟုတ်အချို့သောဖြစ်ကြောင်းကို, ထိုသို့ငါ၏ဒေါသအရှိန်လောင်စာငြင်းပယ်, တန်ပြန်စွပ်စွဲခြင်းနှင့်လဲလျောင်းဖြစ်ပါသည်.
က hard သို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်တာတစ်ဦးသောသူသည်မိမိမိန်းမအားတူတစ်ခုခုပြောဘို့အကြောင်းတကယ်ပဲဖြစ်ပါသည်:
လိင်စွဲ၏အပေါင်းအဖေါ်များတစ်ခါတစ်ရံနှစ်ကြာဟုငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ ဆယ်စုနှစ်များ, ခင်ပွန်းသည် / လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသူတို့အတွက်လိင်မဟုတ်ကြောင်းပြောခြင်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သောViagra or Cialis ပုလင်းတစ်လုံးကိုအံဆွဲ၏နောက်ကျောတွင်တွေ့လိမ့်မည်။ အစပိုင်းတွင် ၄ င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကကိစ္စတခုခုရှိတယ်လို့သံသယရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာစုံစမ်းပြီးနောက်၊ သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်၎င်းအစွမ်းထက်သည့်ဆေးဝါးများကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်ကြောင်းလေ့လာခြင်းဖြင့် ပို၍ ပင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာသည်။ masturbating အင်တာနက်ညစ်ညမ်းပါ!
သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကို restart နှင့်သင့်ဦးနှောက် rewiring အချိန်နှင့်ထောက်ခံမှုယူလိမ့်မည်ဟုနားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာအစအချိန်ယူမည် သင့်ရဲ့ သူမ၏ခံစားချက်များကိုကိုထိခိုက်စေခြင်းနှင့်သင်တို့စပ်ကြားယုံကြည်မှုကို restore အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေထောက်ခံပါတယ်။ ကျနော်တို့အကြံပြု
, သင်နှစ်သက်သော Porn မုန်းတယ် နှစ်ပေါင်းအိမ်ထောင်ရေးကုထုံးခဲ့သူတစ်ဦးသည်လူတို့ကဤလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလမ်းပြမြေပုံများအတွက်
တစ်စုံတွဲ (ဗီဒီယို) အဖြစ် Porn စွဲကိုင်တွယ်
Porn ဖြတ်ရည်းစား?5သိကောင်းစရာများ
"Porn- သွေးဆောင် ED: ငါငါ့ရည်းစားကိုအဘယ်သို့ပြောပြသနည်း။ "
ငါနောက်ထပ်ကျူးလွန်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ဇနီးပြောပြရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အရင်တုန်းကညစ်ညမ်းတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်လာရင်ငါ PMO ကိုအခြားလူတွေလိုပဲလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်သူမသိပေမယ့်ကျွန်မရဲ့စွဲလမ်းမှုကဘယ်လောက်ဆိုးသလဲ၊ ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာသူမမသိခဲ့ဘူး။ သူမအလုပ်ကနေပြန်လာတဲ့အခါ YouTube မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ခုပါတဲ့သူမကိုစောင့်နေတယ်။ ငါနဲ့အတူ living ည့်ခန်းသို့လာရန်၊ သူမအားသောက်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးဗီဒီယိုအချို့ကိုပြချင်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ငါ interwebs မှာရှာတွေ့သူမ၏ရယ်စရာပစ္စည်းပစ္စယအမြဲတမ်းပြသဒါကြောင့်ဒီအရာအလုံးစုံသောပုံမှန်မဟုတ်သောမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါပေမယ့်သူမငါ့ကို WTF ကဲ့သို့ပေး၏?
ပထမဦးဆုံးသောဗီဒီယိုခဲ့သည် ယောက်ျားများ၏နိဂုံးကို (မင်းတို့အားလုံးဒီဗီဒီယိုတွေနဲ့အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိတယ်လို့ငါထင်တယ်) ၎င်းသည်အဓိကအချက်မဟုတ်သော်လည်းနိဒါန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမသည်သူမကြိုက်သော်လည်းချက်ချင်းမရခဲ့ပါ။ ထို့နောက်ကျွန်တော်နှင့်အတူသွားကြ၏ မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု။ အစပိုင်းမှာသူမဟာ OMG လိုမင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ပြseriousနာတွေရှိတယ်၊ ဒါကမင်းရဲ့ညစ်ပတ်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပဲ။ ဒါပေမယ့်ဗီဒီယိုကပြောင်းလဲသွားတာနဲ့အမျှ mmmh၊ ok ။ ငါတွေ့တယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းဘာမှမဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး၊ စသည်တို့…
အဲဒီဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဟောပြောချက်က ၁၀၀x ပိုလွယ်တယ်။ သူမသည်၎င်းကိုလက်ခံပြီးအလွန်အထောက်အကူပြုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်၊ မည်သည်ကိုမျှော်လင့်ရမည်ကိုများစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ ငါအရမ်းနားလည်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူမသည်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်နေသည်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်းသူသည်ကျွန်ုပ်အတွက်လုံလောက်သောဆွဲဆောင်မှုမရှိသောကြောင့်သူမ Coolidge effect ကိုပြပြီး Liz Hurley ကိုလှည့်စားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူမရရှိခဲ့သူ Hugh Grant အကြောင်းကိုအမှတ်ရမိသည်။
ငါသူမကိုမပြောခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ fapstronaut အဖြစ်ကျွန်ုပ်၏ကျောင်းအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယောက်ျားတွေနဲ့စကားပြောခွင့်မပေးဖို့ငါဒါကိုလုပ်ပြီးပြီ။
သင်ဤရှိသည်ကြားဆက်ဆံရေးပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားပေမယ့်ငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမည်။ ငါ့ကိုသငျသညျယောက်ျားတွေနဲ့ငါ့ဇာတ်လမ်းဝေမျှခွင့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အဲဒါကိုမှတဆင့်ခဲ့သူတစ် ဦး ထံမှယူပါ။ ကျွန်မကကျပန်းချတ်စကားပြောခြင်းနှင့်ကင်မိန်းကလေးများကိုတစ်နှစ်ပေးဆပ်ခြင်းဖြင့်သူမကိုလိမ်ညာခဲ့ကြောင်းငါ့ရည်းစားကိုပြောရသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အရမ်းခက်တယ်၊ ငါသူ့ကိုပြောပြခဲ့တဲ့နေ့အတွက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အသင့်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ မှတ်မိရမယ့်အရာတွေ…အရာရာတိုင်းကိုဖွင့်ပြပါ။ ၎င်းကိုစာလုံးပုံစံဖြင့်ရေး။ သင်ပြောချင်သောအရာအားလုံးကိုသင်ချန်ထားကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကလိင် / ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူဖြစ်ကြောင်းကြားသိရခြင်းထက်ပိုဆိုးတာကအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအဖြစ်အပျက်များပိုမိုများပြားလာရန်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုဆွဲထုတ်ခြင်းကညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြစ်ပြီးသင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုမမျှတဘူး
သတိရရမယ့်နောက်အချက်တစ်ခုကတိတိကျကျမပြောဖို့ပါ။ တိကျသောအချိန်နှင့်အတိအကျဖြစ်ပျက်မှုများအကြောင်းမပြောပါနှင့်။ သင်သည်စအိုဖြင့်လိင်အလွဲသုံးစားမှုကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းနေကြောင်းသို့မဟုတ်သားရဲတိရစ္ဆာန်ဗီဒီယိုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြုံတွေ့ရမည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်ကြည့်ရှုနေကြောင်းသူမသိရန်မလိုအပ်ပါ။
မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိပြီးဖြစ်နိုင်သမျှရိုးသားဖို့ကြိုးစားပါ။ ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာယုံကြည်မှုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏အတိတ်ကိုသင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများနှင့်ဖုံးကွယ်ရန်မလိုအပ်တော့သောကြောင့်ထုတ်ဖော်ခြင်းသည်သင့်အတွက်ကောင်းမွန်လိမ့်မည်။ ကမ်းခြေဘောလုံးကိုရေအောက်မှာကိုင်ထားတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်တယ်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့တက်သွားပြီး၎င်းကိုသင်၏မျက်နှာ၌ပေါက်ကွဲခြင်းကိုသင်၏အသုံးအနှုန်းများဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။
ဒီသော်လည်းသင်အကြောင်းကိုမဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ သူ / သူမအပြစ်မတင်ပါနှင့်။ သူတို့ထွက်ပန်းကန်သောအရာကိုယူပါ။ သင်၏အတိတ်ကအမှားများအတွက်တောင်းပန်ပါ။
ငါ့ကိုလည်းကူညီပေးခဲ့ကွောငျးတစျခုမှာကြီးမားတဲ့အရာအနာဂတ်အပြောင်းအလဲအတွက်အဘို့အကြှနျုပျ၏စီမံချက်ကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါပြီးသားတစ်ဦးကုထုံးဆည်းပူးခဲ့ပြီးအပတ်စဉ်ထုတ်သွားခဲ့ခြင်းနှင့်ငါ့အသက်ကိုကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်ဘယ်လိုအဘို့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကိုသင်ပြောင်းလဲပစ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်နှငျ့သငျသူတို့ကဒီကတဆင့်သင်နှင့်အတူနေဖို့ပိုပြီးဖွယ်ရှိပါလိမ့်မည်ပြောင်းလဲသွားချင်ကြောင်းပါ။
ငါ SO2လွန်ခဲ့တဲ့ (gf ၏5နှစ်, ယခုစေ့စပ်) သို့ပြောသည်။ သူမသည်အစတွင်အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသော်လည်း ၁၅ မိနစ်အတွင်းစကားပြောပြီးနောက်သူမကူညီခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ သူမသည် NoFap & YBOP ကိုပိုမိုနားလည်ရန်ကူညီခဲ့သည်။
ယခုသင်တို့ vs နောက်ပိုင်းတွင်ထိုသို့ပြုကြသည်ဝမျးသာဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်စောင့်ဆိုင်းလေလေ၊ သင်သည်“ လိမ်လည်သူ” ဖြစ်နိုင်သည်။
သင့်ကိုကူညီမယ့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၊ သင့် gf / bf / ဇနီး / ခင်ပွန်း / လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ရှိလိမ့်မည်။
ငါဒီမှာအပေါ်အများအပြားသဘောမတူမြင်ကြပြီသူတို့ကသူတို့ရဲ့သိသိသာသာအခြားပြောဘယ်တော့မှမယ်လို့ပြောကြသည်။ PMO နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာအကောင်းဆုံးလို့ပြောဖို့ဒီမှာပဲ။ တစ်ခုချင်းစီကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်ရန်။
ညစ်ညမ်းခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်မှာလွယ်ကူသောကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းနားလည်ရန်ဤ site ရှိအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုရန်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုအားပေးပါ။ တစ်ခါမျှမချိတ်ဆက်ဖူးသူတစ် ဦး ဦး သည်ပညာရေးမရှိလျှင်၎င်းကိုနားမလည်နိုင်ပါ။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဟာညစ်ညမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုရှင်းပြခဲ့ပေမယ့်သူမနဲ့လိင်ဆက်ဆံတဲ့သူနဲ့အတူတူသူတို့ရဲ့အချိန်မတိုင်ခင်နဲ့ပြီးနောက်မှာဘာကြောင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာလဲ
ပထမဆုံးနားလည်ရမယ့်အချက်ကတော့ porn ကသူကိုကျေနပ်မှုမပေးတာပါ။ ယခုအချိန်တွင်သူမတတ်နိုင်ပါ be လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်း, ဤသည်လိင်အကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာစွဲလမ်းမှုပါ အဝလွန်သူသည်သူမဆာလောင်နေသဖြင့်အစာစားနေသလား။ စွဲလမ်းမှုသည်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း၊ သူတို့က ဦး နှောက်ထဲမှာ dopamine နည်းတဲ့မွေးရာပါစိတ်ဆန္ဒတွေပါ။
အင်တာနက် porn သည်လိင်ထက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ dopamine ပြင်ဆင်မှုများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေသည်။ သူ၏ယုံကြည်အားထားရဆုံးအရင်းအမြစ်မှာယခုအခါတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရရင်ဒီဟာမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး သူ၏ ဦး နှောက်သည်ပြောင်းလဲသွားပြီးသုံးစွဲမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသောကြောင့်စွဲလမ်းမှုအားလုံး၏လက္ခဏာဖြစ်သည်။ မင်းကြည့်ပြီးပြီ ကြှနျုပျ၏ဗီဒီယိုစီးရီး ဒါတွေအားလုံးကိုရှင်းပြတာလား ဦး နှောက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုနားလည်ရန်နှစ် ဦး စလုံးအားနှစ်သိမ့်ပေးသင့်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်“ ပျော်ရွှင်သော၊ လိင်ကြွယ်ဝသောဆက်ဆံရေးသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုမလိုအပ်သောအရာဖြစ်စေသည်မဟုတ်လော။ ” လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အလွန်အကံျွသောက်ခြင်း၊ ၎င်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ ပုံမှန်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုခံစားဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း။ ယောက်ျားများအများစုသည်အသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အရွယ်များအစတွင်သူရောက်ရှိလာခြင်းမှာသူဖြစ်နိုင်သည်။
“ porn သည်လိင်ကိုအစားထိုးသင့်သည်” ဟူသောသင်၏ယူဆချက်ကိုကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောမတူပါ။ ယောက်ျားလေးများအားလုံးသည်ယခုအချိန်တွင်“ လိင်ကိစ္စနေရာတွင်အစားထိုးရန်” ကြိုးပမ်းနေသည့်အလွန်တရာမှေးမှိန်သောအမြဲတစေ ၀ တ္ထုများ၊ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နေကြသည်။
သူကသူ့ကိုကြှနျုပျတို့၏ site သွားရောက်လည်ပတ်နှင့်အတူစတင်ပါရှိရပ်တန့်ဖို့လိုလားပါလျှင် ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် Tools များ, သူ့ကိုဗီဒီယို watch, ဖတ်ပြီ ပြန်ဖွင့် Accounts ကို.
ဤတွင်ယောက်ျားတစ် ဦး ၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုသူ့ဇနီးအားရှင်းပြသည့်မှတ်တမ်းဖြစ်သည်။
မနေ့ကငါကကျွန်တော့်ဇနီးကိုတစ်ကြောင်းလုံးပြောပြခဲ့တယ်။ အရမ်းကောင်းသွားတယ် ဒါဟာကိုယ့်မျိုးကိုသူ့ဟာသူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ထိုမိန်းမသည်သူမ၏မွေးနေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါဒီရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာအသံကိုငါသိ၏။ "မင်္ဂလာမွေးနေ့, Darling လိုပဲ။ စကားမစပ်၊ ငါကညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းသူတစ်ယောက်ပါ” ထို့နောက်သူမကသူမကိုပြောပြခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ပေးခဲ့သည့်အကောင်းဆုံးမွေးနေ့ဆုဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။
လက်ဆောင်တွေ၊ ပွေ့ဖက်လိုက်တဲ့အနမ်းတွေနဲ့အတူသူကပုံမှန်မွေးနေ့အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ တကယ်ကောင်းတယ် အဲဒီနောက်အလုပ်သွားပြီးကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အခါရုပ်ရှင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူမမြင်ချင်တဲ့သူက“အရှက်ကွဲခြင်းအားလုံးရုပ်ရှင်၏ ".. ။ ငါမကြာသေးမီကထိုရုပ်ရှင်အကြောင်းသူမ၏ပြောပြသည်။ အဲဒါကလိင်စွဲလမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါအချိန်အကြာကြီးကြည့်ချင်ခဲ့တယ်။ ငါသူမအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုမိုလေ့လာလိုသည်ထင်သည်။ သို့မှသာသူမကအနှေးနှင့်အမြန်ပြောနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ငါဒီရုပ်ရှင်ကြည့်တာဟာညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်၊ တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေတာကိုဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့်ဒီအကြောင်းကိုဆွေးနွေးချင်တဲ့အတွက်ငါစွန့်စားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ တစ်ခုဝန်ခံ ဦး ဆောင်ဖြစ်နိုင်သည်တစ်ခုမှာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ရုပ်ရှင်ပြန်ပြောင်းဖြစ်ပေါ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ အားလုံးကလိင်နဲ့ဗလာကျင်းတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒီကိစ္စကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်၊ ဒါကအရူးလုပ်လိုက်တာပဲ၊ ဒါပေမယ့်ဒါကကျွန်တော့်ကိုပြန်မရစေနိုင်ဘူး။ ဒါ့အပြင်ရုပ်ရှင်ကကျွန်တော့်ဇနီးကိုအရာရာပြောပြစေတယ်။ ငါလုပ်ခဲ့တာဝမ်းသာပါတယ်၊
ရုပ်ရှင်ကကောင်းတယ်ထင်တယ် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာပေါ့၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကဒီစွဲလမ်းမှုကိုလက်တွေ့ကျကျတင်ပြဖို့သူတို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ထင်တယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ကဒီအကြောင်းကိုဘာပြောမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။ ကြားရတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသည်ကွဲပြားသောအရာများဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သော်လည်းရုပ်ရှင်၏အချို့အစိတ်အပိုင်းများတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်သည်။ အများအားဖြင့်ထိုအချည်းနှီး၊ ဒါ့အပြင် porn surfing၊ porn stash စသဖြင့်ပေါ့။ ကြည့်ရတာမနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ပေမယ့်လည်းအရေးကြီးတယ်ထင်တယ်။
ရုပ်ရှင်ပြီးနောက်ကျနော်တို့ကအကြောင်းဆွေးနွေးမှုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ ငါတစ်ချိန်ချိန်သူမကကျွန်မအတိတ်တွင်ထိုကဲ့သို့သောစွဲနှင့်အတူမည်သည့်အတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ဖူးခဲ့ရှိမရှိမေးတယ်ဒါဘာသာရပ်၌ငါ့အားကြီးသောအကျိုးစီးပွား, သူမ၏အံ့သြစရာတစ်နည်းနည်းလုပ်ပုံပါဘဲ။ ပြီးတော့ကျနော့်ကိုသူမတစျခုလုံးအရာကပြောကြားခဲ့သည်။ အရာအားလုံး။ ဒါ့အပြင် yourbrainonporn.com အကြောင်းကို။ အဘယ်သို့ငါဒါအပေါ်စွဲလမ်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်ပါပြီ။ ငါသည်လည်း (သူမသည်ယနေ့ပွုတျောမူသော) ထိုခြောက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစီးရီးစောင့်ကြည့်ဖို့သူမကိုအကြံပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာသင်တန်း၏ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကျော်စကားပြောရန်ကျွန်တော်တို့ကိုနာရီပေါင်းများစွာကို ယူ. , ဒါပေမယ့်အကောင်းတစ်ဦး, အေးဆေးတည်ငြိမ်ဆွေးနွေးမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
သူမစကားမပြောခင်အမြဲတမ်းတွေးတောဆင်ခြင်ပြီးစိတ်ပညာအကြောင်းအများကြီးသိတယ်။ ဒါကြောင့်သူမဒေါသမထွက်ခဲ့ဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူမအတွက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်သူမကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအလွန်အားကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ သူမမှာဘာမှထင်စရာမရှိပေမယ့်သူမဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုပျော်မွေ့နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ခံစားမှုတွေရမယ့်အစားသူမကကျွန်တော့်ကိုအရာရာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးမေးခဲ့တယ်။ အဲဒီညနေခင်းမှာ“ စိတ်မကောင်းပါဘူး” လို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောခဲ့ပြီးပြီ၊ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာပါ၊ ဒါပေမယ့်သူမကကျွန်မကိုတောင်းပန်တာတောင်မှဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး၊ သူမပြောတာကသူမနဲ့သူမဂုဏ်ယူတယ်လို့တောင်ပြောခဲ့တာကြောင့်ဒီကိစ္စမှထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ငါသိတာငါ့ကိုအရမ်းကံကောင်းတယ်။ ငါသူမနားမလည်နိုင်သော်လည်းသူမသည်ကျွန်ုပ်ကိုလေးစားမှုပျောက်ဆုံးသွားမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိကြောင်းသူမကိုပြောခဲ့သည်။ သူမသည်သူမလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ ဤအရာများကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုသည်အမှိုက်ပုံထဲတွင်ရှိနေသည်။ ငါမထိုက်တန်သည့်အံ့သြဖွယ်ဇနီးတစ် ဦး ရရှိထားသည့်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သည့် asshole ကဲ့သို့ခံစားမိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြင်သစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ ငါသိတယ်, စွဲသည်သင်သတိပြုမိစရာမလိုဘဲသို့ချော်တစ်ခုခုဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်နေ့၏အဆုံးမှာငါကအပြစ်ရှိကြောင်းခံစားချက်ရှိသည်။
သူမသည်“ ငါလိင်နဲ့မခံစားရဘူးတဲ့အဆင့်တွေ” ကိုအနည်းငယ်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တော့ငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ငါတကယ်စစ်မှန်တဲ့လိင်ဆက်ဆံလို့မရဘူး။ သူမအတွက်ရက်သတ္တပတ်များစွာလိင်ဆက်ဆံရန်မခဲယဉ်းခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်လိမ်ပြောမိသောကြောင့်သူမစိတ်ပျက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့မုသားဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုအကြောင်းသံသယဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းသည်ရှုပ်ထွေးနေသည်။
ငါစွဲစွဲလမ်းတယ်။ ထိုအခါငါကအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ဘူး။ ငါသူ့ကိုဒီကိုပြောသည် တရားမျှတမှုအတွက်မဟုတ်ဘဲဖြစ်ပျက်နေသောအရာသာဖြစ်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင်များစွာသောအရာတို့သည်ရုတ်တရက်သူ့အားနားလည်သောကြောင့်သူမသက်သာရာရခဲ့သည် နောက်ဆုံးတော့ဖုံးကွယ်စရာဘာမှမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါက reboot လုပ်ဖို့ပိုပြီးလှုံ့ဆော်ပေးလို့ပါ။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲငါဟာအတိတ်ကာလကစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုကိုခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာမှန်ကန်တဲ့အရာကိုလုပ်ရတာအရမ်းပျော်တယ်။
လိင်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ခဏတာမျှမနေခြင်းကပိုကောင်းသည်ကိုသူမကသိသည်။ သူမကကျွန်မကိုချစ်ခင်စုံမက်စွာဆက်ဆံပြီးကျွန်မကိုစွဲလမ်းစေတဲ့အရာအားလုံးကိုလုပ်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ သူမသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲကာလရှည်ကြာစွာခက်ခဲလိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ။ ငါတို့ကဒါကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲအကြာကြီးပဲလုပ်ပြီးဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပဲကြည့်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။
(နေ့ 37) မကြာမီတွင်ဖြတ်ပူးပေါင်းနှင့်အပြီးနည်းနည်းန်းကျင်ကိုတောင်းဆိုနေတာပြီးနောက်, ငါကိုယ်ကဒီခရီးစဉျတှငျသွားကြဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်သူမပဲအထဲကလှန်မယ်လို့သူမကကျွန်မကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုကြားဆက်ဆံရေးနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက်လုပ်နေခဲ့တာကိုသိလျှင်စဉ်းစားမိတယ်။
ကျွန်တော်တိုက်ဆိုင်စွာမည်သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ခြင်းရှိမရှိပြောနေသည့်ပျော်စရာစကားဝိုင်းတစ်ခုတွင်လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့်က (ကျွန်ုပ်သည်တစ်နာရီ nofap သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်) သူမကကျွန်တော့်ကိုဗလာပြတ်စေခဲ့သည်။ သူမကျွန်တော့်ကိုအရင်မေးခဲ့ဖူးတယ်။ တစ်ချိန်ကမှန်တယ်လို့ဒီအချိန်ကို“ မဟုတ်ဘူး” လို့သူမကိုလည်းပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူမကနောက်အိမ်ထောင်ပြုပြီးကတည်းကငါလုပ်ခဲ့သလားလို့မေးခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ငါဝန်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါကဟုတ်တယ်၊ အခြေခံအားဖြင့်ငါစကားမပြောခင်တစ်လလောက်ကမှလုပ်ခဲ့တာလို့ပြောခဲ့တယ်။
ငါသူမကိုထွက်လှန်မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ အဲဒီအစားသူမကငါ့ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရရန်အလုံအလောက်မလုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးတူသောသူမခံစားခဲ့ရသည်။ သူမသည်အလွန်ချစ်ခင်တွယ်တာပြီးထိုညတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ စကားစမြည်ဝိုင်းတွေပြောရင်းသူမပြောတာကသူမပြောတာကသူမခံစားချက်တွေကိုနာကျင်စေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါလိမ်ပြောတာကိုသူမနားလည်တာကြောင့်အရာအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိသာစေခဲ့တယ်။ ငါသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအနည်းငယ်နာကျင်စေတယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အားလုံးကပြောခဲ့တာကအဲဒါဟာအတော်လေးလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်၊ ငါတို့ကအဲဒါနဲ့ပိုပြီးနီးစပ်တယ်။
ကျွန်တော်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးသူမအတွက်လည်းလုပ်ပေးတာသူမအရမ်းပျော်တယ်။ သူမဤနည်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာမိပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာစွာစားသည်၊ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးလိင်ကိုလုံးဝချစ်မြတ်နိုးသည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်က, ငါ့ရည်းစားနှင့်အတူလိင်သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ပတ်လျှင် ၃-၅ ကြိမ်မှတစ်လသို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူ့ထံမှစိတ်အားထက်သန်မှုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ငါစတင်ရန်ရှိသည်နှင့်သူသည်ကျိန်းသေစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ခက်ခဲစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားရုန်းကန်။ ကျွန်မအတွင်းခံနဲ့လိင်အင်္ကျီတွေအတွက်ပိုက်ဆံအများကြီးသုံးခဲ့တယ်။ ပိုမိုဆိုးရွားလာမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်သူ့ကိုတွန်းအားမပေးခဲ့ပါ။
သူကရံဖန်ရံခါအင်တာနက် porn ကိုကြည့်ရှုရန်ဝန်ခံသည် ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ကွန်ပျူတာသမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်ုပ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးသူသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြည့်နေသည်။ snoop မကောင်းဘူးဆိုတာငါသိပေမယ့်ငါအရမ်းအပူလွန်ခဲ့တယ်။ သူကထိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းကိုငြင်းပယ်ပြီးကိစ္စကိုဆွေးနွေးရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
ဒီစာအုပ်ကိုမဖတ်ခင်အထိကျွန်တော်ဟာမလိုလားအပ်တော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာတစ်နည်းနည်းနဲ့ငါ့အမှားဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေသော်လည်းအလွန်ကောင်းတဲ့ပုံသဏ္inာန်ရှိနေသည် ငါကတစ်ကိုယ်ရေနေတဲ့အရွယ်နဲ့တကိုယ်တည်းလိင်တူချင်းလိင်တူချင်းဆက်ဆံတာကိုသဘောကျတယ်။ ငါသူ့ကိုချစ်ပေမယ့်အဖြေတစ်ခုအဖြစ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အနည်းဆုံးတော့ဒါကကျွန်မကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေတယ်။
တစ်ဦးက fapstronaut သူ့ရည်းစားကိုပြောပြ: နေ့ 36-ယင်း fapstronauts တူးကြ၏။
ငါပြောချင်တာက - မင်းဟာအမျိုးသမီးပြissueနာအတွက် nofap လုပ်နေတယ်ဆိုရင်၊ သင် nofap လုပ်နေတာဟာအံ့သြစရာကောင်းတယ်လို့အမျိုးသမီးတွေထင်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိထားပါ။ ကျွန်ုပ်၏ nofap ခရီးစဉ်အကြောင်းကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည့်မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတိုင်းသည်အလွန်စိတ်စွဲမှတ်သွားပြီးသူတို့ကကျွန်ုပ်အားတစ်သက်လုံးထောက်ပံ့ကူညီခဲ့သည်။ ဒီနောက်ကွယ်ကအကြောင်းပြချက်ကဘာလဲဆိုတာငါမသိ; ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်သူတို့၏အကြံဥာဏ်များကိုကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အမျိုးသမီးများလေးစားရမည့်အရာဖြစ်ပုံရသည်။ ငါထင်တာကတော့ nofap ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ထင်နေသလား။ အခြားမည်သူမဆိုသူတို့၏နှစ်ဆင့်ကိုလွှင့်ချင်ပါသလား။
ဒါ့အပြင်ဒီနေ့ဟာငါလုပ်နေတာ ၃၆ ရက်အတွင်းအခက်ခဲဆုံးနေ့ပဲ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုကြည့်ရှုရန်အလွန်ပြင်းထန်နေပြီးကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်က "လူတစ်ယောက်၊ နေလို့တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ဘီလီယံကြိုက်တဲ့ PMO လိုမျိုးအရူးတွေထဲကတစ်ယောက်မဟုတ်ရင်မင်းအဆင်ပြေသွားမှာပါ" !” ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘူး ငါအရှုံးမပေးတော့ဘူး။ nofap ပို့စ်များကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ဤရေးသားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများမှပယ်ရှားရန်အထောက်အကူပြုသည်။
ရုံဇနီးနှင့်အတူ NoFap shared -
wow သူမကကောင်းစွာယူခဲ့ပါဘူး။ သူမသည်သူမ၏စိတ်ခံစားမှု / စက်ဆုပ်ရွံရှာမှုများကိုတားဆီးခဲ့သည်၊ YBOP စီးရီးများနှင့်အတူထိုင်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုကာကွယ်ရန်နည်းဗျူဟာများကိုသဘောတူခဲ့သည်။ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆရာဝန်ကကျွန်ုပ်အားပြောပြရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချိန်မှန်သည်။
မင်းကိုငါပြောခဲ့ပုံကိုသင်စိတ်ဝင်စားလျှင်အိပ်ယာပေါ်မှာလဲလျောင်းနေစဉ်ဖြစ်သည်။ ငါသူမမျက်လုံးကိုကြည့်လိုက်မိပြီးကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုရပ်တန့်နေကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၃ နှစ်ကတည်းကဖြစ်ပျက်နေသောအရာဖြစ်ကြောင်းသူမကပြောကြားခဲ့သည်။ ပြtheနာကသူမမဟုတ်ခဲ့သူ့ကိုနှုတ်အားဖြင့်ကျွန်မအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့သည်။ ထိုအခါငါသူမ၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းတောင်း, သူသည်ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့သည်။ ငါသူမ၏ဖြစ်စဉ်ကိုအချိန်နှင့်နေရာပေးချင်သောကြောင့်မည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရွေ့လျားစေရန်ကြိုးစားခဲ့ပါဘူး။
ဒီနေ့မနက်မှာငါတို့ဟာအရင်ကကတိကဝတ်တွေကြောင့်ကွဲသွားခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာ YBOP ကိုသူကြည့်ပြီးသူမမျက်လုံးတွေကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ ဒါဟာအကြောင်းနောက်ထပ်စကားလက်ဆုံမတိုင်မီကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖြတ်သန်းရတကယ်ကောင်းတယ်။ အဲဒီနောက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေ၊ ငါဘယ်လိုအလုပ်များနေမလဲ၊ k9 filter နဲ့အခြားအရာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်။
သူမဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါမယုံနိုင်ဘူး။ ငါသူမကိုငါတွေ့မြင်ခဲ့ရာသို့မဟုတ်အတိတ်ကဘာမှမလိုအပ်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမပေးခဲ့ပါ၊ အနာဂတ်ကိုသာအာရုံစိုက်ခဲ့ပြီးသူမသည်လည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အခုငါ့မှာဇနီးကောင်းတစ်ယောက်ရှိပြီဆိုတာငါသိပြီ။
ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောအလေ့အထအကြောင်းသူမ၏ပြောပြခြင်းသည်ကျွန်ုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုဘယ်တော့မှမစဉ်းစားဖူးပါ။ ဒီဟာကငါ့ရဲ့စစ်ပွဲနဲ့တစ်ယောက်တည်းပဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးခဲ့တယ်။ အကြောင်းပြချက်မှာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကသူမ၏ဖခင်သည်အလွန်ပြင်းထန်ပြီးအလွန်မှောင်မိုက်သောလိင်စွဲလမ်းမှုတွင်ကြာမြင့်စွာကတည်းကပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်ကိုထင်ရှားပေါ်လွင်စေသည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သူမဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးလူသားကဒီဟာကိုရောပြီးရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောမရောမမှဒီရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောမရောရောမရောမရောနှောရးမကှဲပွားခွားနားဖို့လိုအပျပါတယျ။ ငါဒီအကြောင်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတောင်းခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒီကိစ္စကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်လှန်ဖို့အတွက်သင့်တော်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ သောကြာနေ့မှာ၊ ငါအတွင်း၌တစ်ခုခုသူမနှင့်မျှဝေဖို့တောင်းပန်ခဲ့သည်။
သူမရဲ့တုန့်ပြန်မှုဟာမယုံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့ပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်အထောက်အပံ့နှင့်နားလည်မှုရှိခဲ့တယ်။ သူမကသူမနှင့်သူမမျှဝေခဲ့သည့်အတွက် ၀ မ်းသာကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အလွန်နီးစပ်သည်ဟုခံစားရသောကြောင့်သူမ၌ဤအတိုင်းအတာကိုရင်ဖွင့်နိုင်သည်။ ငါ PMO နှင့် MO ကိုရက်ပေါင်း ၄၀ တွင်အခမဲ့တက်တော့မည်ဟုကျွန်ုပ်အားပြောလိုက်သောအခါသူမအတွက်ကျွန်ုပ်လုပ်ပေးသမျှသည်သူမအတွက်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့်သုံးရက်ကအလွန်ကြီးမားသောဖြစ်ခဲ့ပြီးသူမသည်အလွန်ဂရုစိုက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရသည်၊ ကျွန်ုပ်အမှီပြုနိုင်သည့်ကျောက်တုံးတစ်တုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်ရေးအတွက်ကျွန်ုပ်ပြုခဲ့သမျှသောအထင်ရှားဆုံးသောအရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ နှစ်တွေတစ်လျှောက်ကျွန်မတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအရမ်းဟောင်းနွမ်းလာတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်ဖြစ်ပျက်နေသော (သို့မဟုတ်မဟုတ်သော) အရာများစွာနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းဒေါသ၊ စိတ်ပျက်ခြင်း၊
ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ရက် ၄၀ ကကျွန်တော့်ခေါင်းကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့အမျှငါဒေါသ၊ နာကြည်းခြင်းနဲ့နောင်တရမှုတွေကသူမအပေါ်မဟုတ်ဘဲငါအတိတ်အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်ကြောက်မက်ဖွယ်ရွေးချယ်မှုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဦး တည်လာသည်ကိုမြင်လာသည်။ နှစ်ပေါင်း ၃၀ … .. နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုခြင်းသည်ထိုရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သူမကိုအပြစ်တင်ခြင်းသည်ရဲတစ် ဦး သာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မှန်ထဲတွင်ရှည်လျားစွာကြည့်ရှုရန်မလိုတော့ဘဲနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်၏အဓိကနေရာများကိုကြာရှည်စွာစားသုံးနေသောနတ်ဆိုးများကိုလက်ဖြင့်ကျွေးမွေးရန်တာ ၀ န်ယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်မှန်ကန်သောအမျိုးသမီးနှင့်ကျွန်ုပ်လက်ထပ်ခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်း၌လုံးဝသံသယမရှိပါ။
ဒီမနက်မှာမနက်စာမှာသူမကကျွန်တော့်အသံထဲမှာတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားပြီး“ မင်းအဆင်ပြေလား” လို့မေးတယ်။ ငါသာသူမကိုကြည့်ပြီး“ ရက်ပေါင်း ၄၀” ပြောခဲ့သည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်တနင်္လာနေ့နံနက်တွင်လမ်းခွဲရန်ကောင်းသောလမ်းဖြစ်သည်။
ဒါနဲ့ငါခက်ခဲတဲ့စကားပြောဆိုမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါလိင်ဘဝမရှိခြင်းဟာငါ့အမှားပဲလို့ငါပြောခဲ့တယ်၊ ငါကအနည်းဆုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုရပ်လိုက်တော့မယ်၊ ငါကတော်တော်စွဲလမ်းနေတယ်၊ ​​စဉ်ဆက်မပြတ်သံသရာကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရပ်နိုင်ဘူးဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ ။ ဒါဟာတကယ်တော်တော်လေးကောင်းစွာသွား၏။ သူမသည်သူမအပြစ်မှလွတ်မြောက်ရန်နှင့်ရိုးသားခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်အားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည်သူမအဘို့ဖြစ်၏ဟုပြောသည်နှင့်ငါအစီအစဉ်ကိုဖန်ဆင်းသောတန်ဖိုးထား။
ညစ်ညမ်းမှုစွဲနေသည့်အိတ်ကိုနေ့စဉ်သယ်ဆောင်သွားပြီးနေ့စဉ်နီးပါးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်မည်သူ့ကိုမဆိုလုပ်ခဲ့သည်။ အရူးလား?! လက်ထပ်ပြီး ၉ နှစ်နီးပါးအကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု မှလွဲ၍ သူမထံမှမည်သည့်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမျှမထားရှိပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်နှင့်ပျက်ကွက်ရန်ကြိုးစားခြင်းကကျွန်ုပ်ဘ ၀ ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ယုံကြည်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မျှအရှုံးမပေးနိုင်တော့ပါ။ NOFAP ထဲဝင်ပါ။
NoFap စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီးဒါကကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အရာပဲဆိုတာသိတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာအဖြစ်အမြဲတစေရှုမြင်ခဲ့သော်လည်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်လောက်အထိငါမဆို porn မကြည့်ဘူး၊
NoFap ကိုစိန်ခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့အလုပ်ကနေအိမ်ကိုပြန်လာပြီးကျွန်တော့်ဇနီးအားအားလုံးကိုပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်နှင့်မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေသည့်အပြာ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအကြောင်းပြောပြသည်။ ငါအဆိုးဆုံးအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အိပ်ရာပေါ်မှာညဒါမှမဟုတ်တစ်လလောက်အိပ်စက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်အဆိုးဆုံးသူမကငါ့ကိုစွန့်ခွာ
သူမ၏တုံ့ပြန်မှုလား သူမသည်သူမအလွန်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏ရုန်းကန်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုဂုဏ်ယူကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ငါ့အဘို့အိပ်ရာအဘယ်သူမျှမ?! သူမသည်ငါ့ကိုစွန့်ခွာချင်ကြဘူး?! အဲဒီအစားသူမကကျွန်မဟာပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဘ ၀ ကိုရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီဟာကိုငါလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိပြီးငါနဲ့ပိုရင်းနှီးလာတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်ညကသူမက“ ငါတို့အတွက်ငါတို့လုပ်ပေးတာတွေအတွက်ငါအရမ်း ၀ မ်းသာမိတယ်၊ ငါတို့ဟာဒီရက်သတ္တပတ်မှာနေ့စဉ်လိင်ဆက်ဆံကြမယ်။ ” (ညတိုင်းလိင်မှုကိစ္စသည်လူအချို့အတွက်သာမန်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကလေး ၂ ယောက်ရှိပြီးအရူးနာရီများအလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ထက် ပို၍ လုပ်ရန်အမြဲတမ်းခက်ခဲသည်)
အားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးထွက်နေစဉ်ဇနီးသည်အခြားစုံတွဲကိုလည်ပတ်နေစဉ်ကျောင်းမှသူငယ်ချင်းများနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူတို့နှင့်အတူလည်ပတ်ခဲ့သည်။ သူတို့တွေဟာကျွန်တော်တို့လိုအတူတူအချိန်အတူတူရှိနေပြီးပြproblemsနာအချို့လည်းကြုံတွေ့ရပါတယ်၊ အဲဒါတွေဟာများသောအားဖြင့်သူကအိပ်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ 'အစွန်းရောက်အရသာ' ကနေလာတာပါ။
ကျနော်တို့ရှိခဲ့သည်ညဉ့တစ်ခုမှာငါဘီယာ၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်မိတ်ဆွေများကခင်ပွန်းနှင့်အတူထွက် သွား. , ငါ့ဇနီးသူမ၏ဟောင်းကျောင်းကို chum နှင့်အတူနေ၏။ ငါကောင်လေးမှပြောဆိုသောသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှစကားပြောနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သက်ဆိုင်ရာလိင်ဘဝတွေကို၏ခေါင်းစဉ်ကိုတက်ရောက်လေ၏။
ငါကောင်လေးနဲ့စကားပြောနေတုန်းသူကငါ့ဘ ၀ ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အချက်အထိရောက်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် fapping ကိုစွန့်လွှတ်မည်ဟုပြောလိုက်သည်။ ငါ ၁၄ နှစ်အရွယ်ကစပြီးတစ်နေ့ကိုကြိမ်ဖန်များစွာအကြိမ်ကြိမ်ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာသူ့ကိုပြောပြခဲ့တယ်။ သူကသူဟာတော်တော်လေးတူတူပါပဲဒါပေမယ့်ငါရက်ပေါင်း ၂၅၀ ကျော်မှာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါအရမ်းစိတ်ပျက်သွားတယ်။ ငါဟာနေ့တိုင်းလိင်ဆက်ဆံတယ်လို့သူထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကတစ်ခါတလေ ၄ ညအတန်း၊ တခါတလေ ၄ ပတ်လောက်အချည်းနှီးဖြစ်ခဲ့တာ၊ ငါတို့ဘ ၀ မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေအပေါ်မှာမူတည်တယ်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေအပြီးအိမ်မှာကားမောင်းဖို့တစ်နာရီလောက်ပဲအချိန်ရှိခဲ့တယ်။ သူ့ဇနီးနဲ့သူမစကားပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့မှတ်စုတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့တယ်။ သူဟာအိပ်ခန်းထဲမှာတော်တော်လေးအရသာရှိတယ်၊ အရမ်းဆိုးတာ၊ အကြမ်းဖက်တာဘာမှမရှိဘူး၊ အခြေခံအားဖြင့်သူနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနဲ့တူသလိုပဲ။ နှစ်တွေ၊ PMO တွေကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသာမန်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုငါတကယ်ခံစားခဲ့ရတယ်။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေထဲမှာပျော်နေတုန်းမှာမလိုအပ်ပါဘူး ငါတို့လိင်ဆက်ဆံတိုင်းလုပ်ပါ။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ ၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်ခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်စိတ်မပျက်ပါ၊ ဖြစ်ပျက်သောအခါ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။
ငါတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းစုံတွဲတွေအကြောင်းပြောနေတာကသူဟာငါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကရှိခဲ့တဲ့နေရာနဲ့မနီးမဝေး။ ငါတို့ကားမောင်းနေတုန်းမှာငါ PMO ပြproblemနာနည်းနည်းလေးနဲ့ဒီခရီးကိုသွားခဲ့တာကိုသူမကိုပြောပြဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ထင်ခဲ့တယ်။
သူမတကယ်အံ့အားသင့်သွားပြီးငါ PMO'd မည်မျှရှိသည်ကိုသူနှင့်အတော်အတန်ပွင့်လင်းစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ သူမသည်အံ့အားသင့်သွားပြီးယောက်ျားအားလုံးသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်အခြားသူများနှင့်ပါကစားမည်ဟုယူဆသော်လည်းညစ်ညမ်းသောကမ္ဘာ၏ပုံသဏ္ဌာန်သည်ယောက်ျားများနှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သည်ကိုမသိရှိပါ။
ကျွန်ုပ်သည် (၁၀၀ ခန့်စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါဖြစ်ခဲ့တာဘယ်လိုပါလဲ) ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက်မည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ အားလုံးပြီးဆုံးသွားသောအခါနှင့်ကျွန်ုပ်၏လှုံ့ဆော်မှုပမာဏမည်မျှပြောင်းလဲသွားသည်ကိုများစွာပြောခဲ့သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များတွင်အထူးခက်ခဲသောကာလတစ်လျှောက်ဖြစ်ပျက်နေသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်တက်တာကိုငါဘယ်တော့မှမခံစားခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့် NoFap ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာအောင်ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ငါဝမ်းသာခဲ့တယ်။ ဒါဟာကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးမညီကြောင်းဖြစ်ခဲ့တာပါ၊ သူမနဲ့ကျွန်တော်မဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာတစ်ခုပါ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှစပြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်မတို့ဟာပိုပြီးပွင့်လင်းတဲ့စုံတွဲပါ။
သူမသည် (ငါကမှ ok ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်) ကအကြောင်းသူမ၏မိတ်ဆွေပြောနေတာခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်အတွက် fapping ရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထံသို့လာခဲ့ရသည်သောပြဿနာလည်းရှိသေး၏။
ငါသူမ YBOP ဗီဒီယိုကိုပို့လိုက်ပြီးသူမဒီနေ့လည်ခင်းကိုကျွန်တော်အလုပ်မှာရှိနေတုန်းကြည့်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမထံမှချစ်စရာကောင်းသောအီးမေးလ်တစ်စောင်ရခဲ့သည် (ဆွေးနွေးမှုများမလိုအပ်သည့်နက်နက်နဲနဲကိုယ်ရေးကိုယ်တာတစ်ခုခုကိုဖော်ပြလိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာခဏအီးမေးလ်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းစီကိုမှတ်စုရေးခြင်းများပြုလုပ်သည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလုပ်လုပ်သည်) သူမကမည်မျှခက်ခဲကြောင်းနားလည်ကြောင်းပြောရန် သူမအပြုအမူကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီ။ သူမတကယ်အထောက်အပံ့ပေးနေတယ်။ ငါလိုအပ်တာတစ်ခုခုရှိရင်ကူညီလိမ့်မယ်။
သူမသည်သူမကပုဂ္ဂိုလ်ရေးခရီးဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အဘယ်ကြောင့်သူ့ကိုငါပြောပြရန် 250 ရက်ပေါင်းကျော်စောင့်ဆိုင်းကိုနားလည်ကြဟုဆိုသည်။ ကြားရတာကြီး, ငါတကယ်လွန်ခဲ့တဲ့သူမ၏အသက်အရွယ်ကိုပြောပြချင်ခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်ချီ လာ. ရုံဘယ်တော့မှမ။
ယခုသူမအသက်တာ၌ရှိသောယောက်ျားများကိုအခြားနည်းဖြင့်ကြည့်နေသည်။ သူမရဲ့အစ်ကိုမှာစိတ်ဓာတ်ကျပြီးစွမ်းအင်လည်းမရှိဘူး။ သူမှာ PMO ပြgotနာရှိနေတယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကအပြောင်းအလဲကိုလုပ်ချင်တယ်။ သူမကသူမအကြောင်းပြောရင်သူကသူ့ကိုဖိအားမပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။
အနှစ်သာရမှာဤနှစ်များအားလုံး (ယခုဆယ်စုနှစ်နီးပါးခန့်) အပြီး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုနီးကပ်လာပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူမအားပြောခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ဝမ်းသာပါသည်။ ဤ post ၏အနည်းငယ်ကျိုးပဲ့သောသဘာဝအတွက်တောင်းပန်သည်များကျွန်ုပ်သည် (တစ်ချိန်က ၄ ကြိမ်ခန့် fapping မှရပ်တန့်ခဲ့သော်လည်း၊ ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ခန့်ကြာပြီးနောက်တွင်၎င်းသည်လျော့နည်း။ မလိုအပ်တော့သည်) ကျွန်ုပ်၌ဤအချိန်၌မရှိခဲ့ပါ။ ရပ်ရွာအကြီးအကျယ်ကြီးထွားလာသည်ကိုကြည့်ပါ။
TL; DR, ငါ fapping ရပ်တန့်နှင့်သူမအကြောင်းကိုတကယ်အေးမြခဲ့တယ်ကျွန်တော့်ဇနီးကပြောကြားခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏တံဆိပ်တွင်ကျွန်ုပ်သည် (၃) ရက်သာသာကစားနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိသည်။ (ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းက porn ကိုခေတ္တကြည့်ခဲ့သည်၊ မိုက်မဲခြင်း၊ “ chaser effect” နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ post ကိုကြည့်ပါ) ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၌ကျွန်ုပ်၏ခါးပတ်အောက်၌ ၁၀၀+ ရက်ပါသော noporn အစင်းတစ်စုံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် PMO နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်မှစ၍ အော်ဂဇင်ကိုမရရှိခဲ့ပါ။ လွန်ခဲ့သော ၉ လတာကာလအတွင်း PMO အလေ့အထကိုရပ်တန့်ရန်မှာကြီးမားသောခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အတွက်။
မေးခွန်း: PMO အလေ့အထကိုတိုက်ထုတ်သောကျွန်ုပ်တို့အချို့သည်လက်ထပ်ကြသည်။ ငါအဲဒီစခန်းထဲကိုကျသွားတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာ ၂၅ နှစ်ရှိပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမေးခွန်းဟာမကြာခဏပေါ်လာတတ်တယ် - မင်းရဲ့ဇနီးသို့မဟုတ်အဖော်ကိုပြောပြခဲ့တာလား။ အတိုဆုံးအဖြေကတော့ငါလုပ်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါကရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုပဲ ငါ့အဘို့နှင့်သူမ၏များအတွက်.
နောက်ခံသမိုင်း: ပထမညညနေခင်း မှလွဲ၍ အခြားအရာများ၌ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့် (သို့မဟုတ်သူမရှေ့တွင်ရှိခဲ့သောအမျိုးသမီးများနှင့်) ED သို့မဟုတ် PE ပြissuesနာများတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဖူးပါ။ ထိုအခါအင်တာနက်သည်ငါတို့အိမ်သို့ရောက်လာပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့၊ အကန့်အသတ်မဲ့၊ အမည်မသိသောအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Penthouse ကိုဘယ်သူလိုအပ်သလဲ။ ကျွန်တော့်ဇနီးပင်ပန်းနေရင်ဘယ်သူကဂရုစိုက်မှာလဲ။ မည်သူမဆို၊ ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ ဘာလုပ်လုပ်၊ ဘယ်သူ့ကိုမှကြည့်လို့မရဘူး။ တခါထပ်ခါတလဲလဲတစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ porn ကကျွန်မတို့ရဲ့လိင်ဘဝကိုထိခိုက်နေပြီး PMO ကိုဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ငါဘာလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသလဲဆိုတာကျွန်တော့်ဇနီးကိုတောင်မှပြောပြလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကဘာကြောင့်ပြaနာတစ်ခုလို့ထင်ရတာလဲ (သူမရှင်းပြဖို့အပြည့်အဝမတတ်နိုင်လို့) သူမကအတိအကျနားမလည်ခဲ့ဘူး။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စွဲလမ်းမှု၏ထူးခြားချက်များစွာရှိသည်ကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည် - အကယ်၍ ၎င်းကိုရရှိနိုင်ပါက၎င်းကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိမတားဆီးနိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏နောက်ထပ်ပြင်ဆင်ချက်ကိုအစဉ်မပြတ်စဉ်းစားမည်၊ ကျွန်ုပ်ငွေဖြုန်းနေသည်။ အဲဒါနဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာကျွန်မဟာပိုခက်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်မိလာတယ်၊ ပြီးတော့ငါဟာ porn ကိုကြည့်ရှုနိုင်မယ့်အခြေအနေတွေကိုတည်ဆောက်ဖို့ငါ့ရဲ့အပြုအမူကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ ဒါကကျွန်မကိုစိတ်ပူခဲ့တယ်။ ငါဟာဇနီးနဲ့သိပ်ကြာကြာမနေနိူင်ဘူး၊ ကျွန်မတို့ရဲ့လိင်ဘဝပြောင်းလဲလာတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသူကစိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ သူမကသူမကိုနှိုးဆွခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမလိုက်စားတဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ထားမှသာ (ငါ့အကြိုက်ဆုံး porn "အပျော်တမ်း" စသည်တို့အဝတ်အစားအမျိုးအစားသင်တန်း၏) ။
ငါ (၁၇ နှစ်လုံးလုံးကြက်ဆင်အအေးခန်းကိုသွားခဲ့တယ်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာ PMO ကင်းလွတ်ခွင့်ရခဲ့ဖူးတယ်) ဒါပေမယ့်ငါကပြားချပ်ချပ်တစ်ချောင်းရှိတယ်၊ ဘာလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမြင်တွေ့နိုင်သမျှတွေအတွက်၊ ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲသွားခြင်းဟာငါ့ရဲ့လိင်ကိုဖျက်ဆီးတယ်။ မောင်းတယ် ထို့နောက် (ပြန်လည်ကျင့်သုံးပြီးနောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသစ်ကိုရှာဖွေနေစဉ်) တွင်သင်၏ Brain On Porn နှင့်ဤခွဲခွဲကိုတွေ့လိုက်သည်။ တကယ့်ဗျာဒိတ်ပါတကား! ငါ PIED အကြောင်း, သေခြင်းချုပ်, PMO သံသရာနှင့်ငါထင်သောအရာကိုငါ့အပြissuesနာများသာအခြားယောက်ျားတွေအများကြီးအားဖြင့်မျှဝေသောအရာဖြစ်ကြ၏အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။
ကြှနျတေျာ့ဇနီးပြောနေ: ကျွန်မတို့မှာအိမ်ထောင်ရေးသာယာပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့တောင်မှကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့တန်းတူဖြစ်ပျက်နေတာကိုအတိအကျပြောပြဖို့မလွယ်ကူဘူး။ ငါ PMO အကြောင်းလေ့လာခဲ့ရာကိုသူမအားပြောပြခဲ့သည်။ သူမစော်ကားခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းမခံခဲ့ရပါ။ သူမကလွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပျက်နေသည်ဟုထင်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် PMO ပြproblemနာကိုကျွန်ုပ်အသေးစိတ်ရှင်းပြသည့်အချိန်အထိအပိုင်းအစများသည်ပြိုကွဲသွားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်သူမကိုငါ“ လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်း” တွင်ကျွန်ုပ်မခေါ်ခဲ့ပါ။ သူမလည်းအဲဒီမှာမသွားချင်ဘူး။ သူမပြောပြတာကငါတို့အတွက်လုပ်သင့်တာအမှန်ပဲ။
သူမ၏ထောက်ခံမှုကြီးမားတဲ့ခဲ့ကာကြီးမားသောအလေးချိန်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးတူသောငါခံစားရတယ်။ ငါဖြောင့်ကိုငါ့ဇနီးနှင့်အတူဖြစ်ခြင်းလုံးဝသွားဖို့လမ်းခဲ့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်တန်းငါကအခြားမည်သူမဆိုအဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမည်သို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့မရပါဘူး။
ရလဒ်များ: ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ထောင်ရေးသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုခိုင်မြဲသည်။ ကျွန်ုပ်၏အလေ့အထကိုဖုံးကွယ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ ၀ ယ်ယူခြင်းမှ ၀ ယ်ယူခြင်းကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းနှင့်သူမမှကျွန်ုပ်၏လိင်စွမ်းအင်ကိုဖုံးကွယ်ထားမည့်အစား၎င်းသည်ယခုအခါပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်လွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမ (သို့မဟုတ်မည်သူမဆို) ကျွန်ုပ်၏ browsing history ကိုရှာဖွေခြင်း၊ သို့မဟုတ် porn stash စသည်တို့ကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ခင်ပွန်းကောင်းဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်သည်အိမ်မှုကိစ္စများပိုမိုလုပ်ဆောင်သည်၊ သူမနှင့်အတူတာဝန်များမျှဝေသည်၊ ငါ၏အ porn ကို fix ဖို့နည်းလမ်း) ။ သူမကအဲဒါကိုသဘောကျပြီးအပြန်အလှန်အကျိုးဆောင်ပေးလို့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်မှုဘ ၀ သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ နှင့်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများကိုအများကြီးရှိခဲ့သည်။
TL / DR ဒါဆိုမင်းရဲ့ဇနီးဒါမှမဟုတ်လက်တွဲဖော်ကိုပြောပြသင့်သလား။ တခြားသူတွေအတွက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာငါမသိဘူး ဒါပေမယ့်ငါကကျွန်တော့်ဇနီးနှင့် nofap၊ noporn၊ PMO အကျင့်ကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားတာတွေအကြောင်းပြောခဲ့ပြီးပြီ။ သူမရဲ့အကူအညီနဲ့ကူညီမှုတွေကငါတို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက်ကောင်းပါတယ်။
ဤနေရာတွင်အသေးစိတ် (ငါ၏အ post ကိုတချို့၏ကျယ်ပြန့်သောဗားရှင်း): http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/20i1vi/married_and_over_50_pmo_problem_told_my_wife_my/
သငျသညျချိန်ခွင်လျှာရန်သင့်ဦးနှောက်ကို restore အဖြစ်နေ့စဉ်နှင့်အတူသငျသညျအကြားယုံကြည်မှုအားကောင်းလာစေရန် Bond အပြုအမူတွေ.